एसईईको नतिजा सार्वजनिक, तपाईको कुन जिपिए आयो ? – Kavrepati
Home / समाचार / एसईईको नतिजा सार्वजनिक, तपाईको कुन जिपिए आयो ?
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, तपाईको कुन जिपिए आयो ?
admin August 7, 2021	समाचार Leaveacomment 203 Views
विद्यार्थी अध्ययन गरेकै विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कन सङ्कलन गरी बोर्डले प्रमाणित गरेर नतिजा प्रकाशन गरेको हो । भाइरस सङ्क्रमण बढेपछि यस वर्ष विद्यार्थीको भौतिकरुपमा परीक्षा सञ्चालन नगरी विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्नका आधारमा एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको बोर्डको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित निर्णय गरेको हो । कक्षा १२ को आगामी साउन ३१ गतेदेखि भदौ ९ गतेसम्म हुन लागे तय गरिएको थियो । शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमण फेरि फैलन थालेपछि शिक्षा मन्त्रालय र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
Previous भ्वाइस अफ नेपालको फाइनल आज, कसले मार्लान् बाजी ?
Next भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीको श्रीमती निता १ अर्ब भारुको कार चढ्छिन्, यस्तो छ उनको कार